Casuumaad FLISoL 2015 ee Cuba | Laga soo bilaabo Linux
Casuumaad FLISoL 2015 oo ka socota Cuba
Berri, Sabti, Abriil 25, ayaa FLISOL, Latin American Festival of Rakibaadda Software Free.
Sida sanad walba halkan Cuba, dhacdo ayaa lagu qabtaa Havana (caasimada) halkaas oo ISO-yada, keydka guryaha lagu qaato (Cuba Waxaan qiyaasayaa in ka yar 2% ay leeyihiin internet ballaadhan oo guryahooda ah, sidaa darteed baahida loo qabo in lagu helo repo), dukumiinti, fiidiyowyo, iwm. Intaas waxaa sii dheer, shirarka waxaa laga bixiyaa mowduucyo kala duwan oo la xiriira Software-ka Bilaashka ah, wax yar ayaan ka faahfaahin doonaa.
Munaasabadan oo ka dhaceysa Havana, Cuba, ayaa lagu qaban doonaa Xarunta Dhexe ee Kombuyuutarka, waxay si rasmi ah u bilaabmi doontaa 9ka subaxnimo, sikastaba waxaan ogahay waaya aragnimadii sanadihii hore ... in badan ayaa soo gali doonaan 7 ama 8AM si ay u nuquliyaan macluumaadka una dhigaan
Halkan waxaan idinkaga tegayaa barnaamijka oo dhameystiran ee munaasabada, maxay noqon doonaan shirarka la bixin doono, jadwalka, iwm.
Barnaamijka faahfaahsan ee FLISoL 2015 ee Havana Cuba (pdf)
Sidii aan sameyn jirnay sanadihii hore (2011, 2012, 2013 y 2014), si uun ayaan u maareeynaa inaan u qaybinno istiikarada iyo hadiyado kale martida, kuwa hadlaya ... ama si fudud, istiikarada (istiikarada) cid kasta oo danaynaysa 😀
Markan istiikarada waxay ku mahadsantahay Firefoxmanía, oo isku dubariday isla markaana daabacay istiraatiijiyadan qabow ee aan halkaan ku aragno:
Sidaan horeyba kuugu sheegay, waxaan haysan doonaa dhowr GBs oo macluumaad ah oo aan nuqul ka sameysanno, ISOs iyo Keydadka ayaa lagu soo daray, meelaha qaar ee wax lagu keydiyo waxay noqon doonaan:
Xarumaha 6 iyo 7
Ubuntu 14.04 iyo 15.04
… Kuwa kale… 🙂
Waa kuwan fiidiyow xayeysiin kooban oo loo sameeyay munaasabadda:
Kuwa halkan qabanqaabada ka abaabulaya ayaa ah GUTL, aadanaha, Firefoxmanía ... iyo sidoo kale, Elav iyo qof kasta oo qora KZKG ^ Gaara 🙂
Iyo dibedda Cuba?
Halkan waxaan uga tagayaa macluumaadka laga heli karo Goobta Rasmiga ah ee FLISoL ku saabsan dhacdada ka jirta dalalka kale ee gobolka:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Casuumaad FLISoL 2015 oo ka socota Cuba
Waa wax laga xumaado inay tahay oo kaliya wadamada ku hadla Isbaanishka, ilaa hada, duruufaha noloshayda awgood, waxaan joogaa Faransiiska oo halkan ma joogaan ku dhowaad in badan oo ka mid ah dadka isticmaala ilaha furan, magaaladayda waxaan ka mid ahay kuwa kaliya ee isticmaala Linux.
Si fiican ugu raaxee munaasabadda, kuwa taga.
Ku jawaab erUzama
Hambalyo iyo salaan, walaalaha Cuba! Waxyaabo badan ayaa ina kala saari kara, laakiin waxaan ku mideysan nahay jacaylka barnaamijka bilaashka ah / bilaashka ah / iskaashiga ah.
Cuba waa waana inay noqotaa tusaale (oo waxaan rabaa inaan ka helo fikradaha jidka), marka la eego GNU / Linux, sababtoo ah xilligeeda gaarka ah ee marinka adag ee isku xirnaanta khadka ballaadhan iyo xayiraadaha kale, ee la macaamil badan oo saaxiibtinimo iyo saaxiibtinimo, hubayn iyo ku-soo-celin dusha saxannada; oo si dijitaal ah wax loogu barto xorriyadda. Waxaan qiyaasayaa inay jirto maskax aad u weyn iyo dad ku tababbaran softiweer bilaash ah, taas oo ay aad u qadarin doonaan deriska woqooyi marka ay aadayaan maalgashiga iyo shaqaalaynta xirfadlayaasha. Iyo sidoo kale Revolution Digital oo ka soo horjeeda soo dejinta barnaamijyada aan loo baahnayn.
Salaanteyda iyo tan asxaabteyda ah ee ka socda FLISOL-kayga adiguba adigu aado, mana qiyaasi kartid hamiga ah inaad kujirto Havana gubista iyo wadaagida diiwaanada, aqoonta iyo saaxiibtinimada!
Salaan ka timid xarunta dhexe ee Córdoba, Argentina!.
Waa hagaag ninyahow, yaa FLISOL ay u imaaneysaa naga soo qeyb gal 😀
Hindise wanagsan. Waxaan rajeynayaa in munaasabadaha sidan oo kale ah lagu sii wado, iyo inbadan iyo in ka badan oo dalal badan.
Ku jawaab hal-abuure
Waa maxay wax laga xishoodo, waxaan hadda ogaadaa (Juunyo) iyo Koonfur Afrika. Waxaan isku dayi doonaa inaanan seegin midna.
(Isticmaalaha Linux-ka ... waqti)
Ku jawaab cr
Ku noqoshada disto dhaqameed ka imanaya sii deynta duubista
Soo dejiso Adag, basaaska WhatsApp